Tatitra momba ny fotodrafitrasa – MATP: mirefy 14 300 km ny lalana voakojakoja sy narenina | NewsMada
Anisan’ny navoitran’ny Praiminisitra Ntsay Christian, tamin’ny tatitry ny asa vitan’ny governemanta ny ezaka nataon’ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fanajariana ny tany sy ny asa vaventy (MATP). Eo ny fanamboaran-dalana sy ny fanajariana. Fa eo koa ny fanorenana trano fonenana ho an’ny rehetra.
“Mirefy 14.300 km ny lalana vita fikojakojana, fanarenana na fanorenana mba ho azo ampiasaina manerana ny distrika rehetra manerana ny Nosy… Tsy nahasakana ny fanatanterahana ireo fandaharan’asam-panjakana nampiandraiketana azy ny vokatra azo eo amin’ny sehatry ny asa vaventy na teo aza ny valanaretina”, hoy izy. Anisan’izany ny eto Antananarivo Renivohitra, Atsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Moramanga, Brickaville, Taolagnaro, Amboasary…
Notsindriny fa mandroso ny fanarenana ny RN44 mampitohy an’i Marovoay sy Vohidiala ary efa manakaiky ny 40% ny asa amin’izao fotoana izao. Efa vita ny tetezan’i Manaingazipo eo amin’ny RN3A mampitohy an’i Vohidiala sy Andilamena. Efa mananika ny 44% ny asa vita ho amin’ny fanarenana ny RN5A mampitohy an’Ambilobe sy Vohemar, mirefy 159 km.
Miroso ny fanamboarana ny RN9 mampitohy an’i Toliara – Analamisampy – Bevoay – Manja. Efa vita tanteraka ny mampitohy an’i Toliara sy Analamisampy raha manomboka kosa ny fanarenana an’i Analamisampy – Manja miaraka amin’ny fanorenana ny tetezana eo amin’ny Reniranon’i Mangoky “Bac Bevoay”.
Fanarenana ny RN13
Etsy an-daniny, mitohy ary mandroso ny fanomanana ny tolotrasa ho amin’ny fanarenana ny lalam-pirenena RN13 mampitohy an’i Ambovombe sy i Taolagnaro. Tahaka izany koa ny tolotrasa fanarenana ny RN6 mampitohy an’Ambanja – Antsiranana ary hanomboka tsy ho ela ny asa fanamboarana
Manampy izany ny fanamboarana ny “Rocade-Est” ary efa manodidina ny 90% ny fahavitan’ny asa, miaraka amin’ny fanamboarana ny “Route des oeufs” eny Mahitsy.
Hotohizana ny fanarenana ny RN5 mampitohy an’i Toamasina – Foulpointe – Fenoarivo Atsinanana – Soanierana Ivongo – Mananara – Maroantsetra. Vita koa ireo lalana amin’ny renivohi-paritany rehetra. Singanina manokana ireo lalana mivoaka ny tanànan’Antananarivo.
Maro ireo ezaka vita eo amin’ny fanajariana ny tany. Anisan’izany ny fanomezana “titres fonciers” miisa 6.476 sy ny “certicats fonciers “ miisa 36.164, ny taona 2020.
Fanorenana Tranobe R+4 eny Ivato
Momba ny tanàna vaovao sy ny trano fonenana kosa, nanomboka ny fanorenana trano ho an’ny daholobe ka hisitraka izany ny any Fianarantsoa, Arivonimamo, Toamasina I, Antsiranana I, Mahajanga I ary Antsirabe I, Morondava ary Nosy Be.
Efa vita ny fanamboarana ny trano fonenana 30 ho an’ny daholobe ao Amborovy Mahajanga I. Efa natomboka ireo fanorenana trano 640, mitsinjara “lots” valo ao anatin’ny distrikan’ Arivonimamo, Antsiranana I, Toamasina II, NosyBe, Morodava.
Natomboka koa ny fanorenana tranobe miisa telo, ho an’Antsiranana I, Toamasina II ary Fianarantsoa.
Ankoatra izany, efa nanomboka koa ny fanorenana tranobe R+4 sivy, misy “appartements” 15 ao Ivato, miisa 36.
Efa vita tanteraka koa ny fanajarian ny toerana hananganana tanàna vaovao, mirefy 6 ha eny Ivato. Tahaka izany koa ny toerana hanorenana tranobe R+4 , miisa 29 ary mirefy 8 ha ao Ivato.